FLV in iPad 3: Beddelaan FLV in iPad The New (iPad 3) "
> Resource > iPad > Sida loo Beddelaan FLV in iPad Cusub (iPad 3)
FLV waa qaab guud oo loo isticmaalo in lagu video samatabbixin video internet-ka. Sidaas awgeed waxa dhibaato ah ma si aad u hesho videos online FLV oo iyaga u ururiyaan on your computer u badan tahay. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari uruuriyaa FLV aad ku iPad cusub 3, waxaad soo gudbi arin leheyn. Taasi waa run in FLV lama jaanqaadi iPad 3. Hal xal oo ay tahay in loogu badalo FLV in iPad 3 loo maqli karo.
Si videos ka format FLV soo galeen qaab iPad 3 taageerto, waxaad isticmaali kartaa a video Converter weyn si ay uga caawiyaan aad qaban qaab beddelidda. In this article, waxaan soo bandhigi doonaa sida qalab smart u Mac iyo Windows madal kasta. Labada ku siin karaan awood u leeyahay inuu badalo FLV in kasta oo qaab kale video caan ah, iyo sidoo kale in aad bixisaa qaab filaayo in iPad 3 uu u fududayn lahaa howlgalka on madal kasta. Dadka isticmaala Mac, waxaad kala soo bixi kartaa Video Converter u Mac , halka Video Converter u Win waa macaamiisha Windows.
Next, inaan qaato version Windows ah, tusaale ahaan si ay u sharxaan FLV in ay iPad 3 diinta talaabo talaabo ah.
Talaabada 1: Load videos FLV in FLV in ay iPad 3 video Converter
Laga soo bilaabo menu ugu weyn, waxaad riixi kartaa "Add Files" button in caleenta iyo FLV dejinta files barnaamijka. Haddii files FLV aad waa soo dhow yahay, hab fudud in ay dajiyaan files FLV waa in ay si toos ah jiidi oo hoos u files bartilmaameedka in app this.
Si aad u dooratid horena u filaayo in iPad 3, waxaad riixi kartaa qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, furo liiska hoos-hoos qaabka, ka dibna tag "Device"> "Apple"> "iPad".
Waan ognahay iPad 3 inta badan taageertaa qaab MP4. Haddii aad rabto in ay doortaan MP4 sida qaab wax soo saarka, waxa kale oo aad dooran kartaa MP4 ee "qaab"> "Video" category. Sidoo kale, dhigay Encoder, Resolution, heerka jir ah iyo heerka Inyar iwm ee "Settings" furmo suuqa, sida ay iPad 3 ee casriga ah Details (eeg liiska ku lifaaqan).
Tallaabo 3: Ka billow si loogu badalo FLV in iPad 3
Hit "Beddelaan" si ay u bilaabaan diinta files FLV si aad u iPad cusub 3. Marka diinta lagu sameeyo daqiiqado yar ka dib, an "Open Folder" doorasho ayaa la soo bandhigi doonaa xagga hore ee indhahaaga. Just u riix si aad u furato galka iyo ka heli files saarka halkaas. Hadda, waxaad ka dhigi kartaa faylasha wax soo saarka ee iPad 3 oo aan wax dhibaato ah. Just iyaga dajiyaan in Lugood iyo markaas iyaga u hagaagsan in aad iPad 3. Taasi oo dhan.
Fiiro Gaar ah: Tani Converter Video sidoo kale ku siinayaa qaar ka mid ah hawlaha tafatirka awood badan, sida saamayn ku daray, watermark, iyo subtitles iwm Haddii baahida loo qabo, in aad edit karaa files FLV hor diinta.
iPad 3 ee Details casriga ah ee video: